Nnwom 111 AKCB - مزمور 111 NAV
Mefi me koma nyinaa mu ama Awurade so
wɔ atreneefo aguabɔ ne asafo no mu.
2Awurade nnwuma yɛ akɛse;
wɔn a wɔn ani gye ho nyinaa susuw ho.
3Ne nnwuma yɛ tumi ne anuonyam,
na ne trenee wɔ hɔ daa.
4Ɔma yɛkae nʼanwonwade;
Awurade yɛ ɔdomfo ne mmɔborɔhunufo.
5Ɔma wɔn a wosuro no no aduan;
ɔkae nʼapam no daa.
6Wakyerɛ ne nkurɔfo tumi a ɛwɔ ne nnwuma mu,
sɛ ɔde aman afoforo nsase ama wɔn.
7Ne nsa ano nnwuma yɛ nokware na ɛteɛ;
nʼahyɛde nyinaa mu wɔ ahotoso.
8Etim hɔ daa daa,
nokware ne trenee mu na ɔyɛe.
9Ɔde ogye maa ne nkurɔfo;
ɔde nʼapam sii hɔ afebɔɔ,
ne din yɛ kronkron na ɛyɛ hu.
10Awurade suro yɛ nyansa mfiase;
wɔn a wodi nʼahyɛde so nyinaa wɔ nhumu pa.
Ɔno na daa ayeyi wɔ no.
AKCB : Nnwom 111